Allgedo.com » Iska horimaad ciidamo ka wada tirsan DKMG ah ku dhex maray Muqdisho iyo barakacayaal lagu furay rasaas
Iska horimaad ciidamo ka wada tirsan DKMG ah ku dhex maray Muqdisho iyo barakacayaal lagu furay rasaas
Muqdisho, Somalia (AOL) – Inta la ogsoonyahay hal askari ayaa ku dhintay laba qof oo kalena way ku dhaawacmeen dagaal ciidamada DKMG ah ku dhexmaray degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir, iyadoo dagaalku uu ka dhacay agagaarka bacadlihii hore ee degmada Xamarweyne. Ciidamada dowladda ayaa waxay qaarkood ahaayeen kuwo doonayay inay ka hortagaan ciidammo gaadiidka uga qaada halkaas lacago baad ah, balse markii ay isfahmi waayeen ayaa waxaa billaabatay rasaas. “Iska horimaadku wuxuu billowday daqiiqado kaddib markii ay halkaas soo gaareen ciidammo hubeysan, waxaan arkay dhimashada askari iyo dhaawaca laba qof oo kale,” ayuu yiri goobjooge halkaas ka dhawaa.
Qof Goobjooge ka aha ayaa sheegay in ciidamadii lacagta ku qaadi jiray halkaas la eryay oo ay goobta la wareegeen ciidamadii dowladda ee ka horjeeday isbaarooyinka, waxana tani ay qayb ka tahay howlo ay dowladdu kaga hortagayso isbaarooyinka yaala magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo toddobaadkii hore kula hadlay Muqdisho saraakiisha ciidamada DKMG ah ayaa ka dalbaday inay dhexda u xirtaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen isbaarooyinka iyo askarta dhibaatada u geysanaya shacabka iyo barakacayaasha.
Dhana kale, warar ay baahiyeen qaar ka mid ah idaacadaha ka howlgala Muqdisho ayaa lagu sheegay in xoogag ka tirsan kuwa Al-shabaab ee gacanta ku haya deegaanka Ceel-macaan ee duleedka Muqdisho ay rasaas ku fureen barakacayaal loo qaybiyay gargaar bani’aadamnimo, uuna halkaas ku dhintay qof ka mid ah dadkii raashinka loo qaybinayay.
Goobjoogayaal ay soo xigteen idaacadaha ayaa sheegay in dadka raashinka loo qaybinayay ay billaabeen inay ku yaacaan raashinkii la qaybinayay taasna ay keentay in la furo rasaasta dhimashada keentay, laakiinse Xarakada Al-shabaab weli kama aysan hadlin arrintan dhacaday.
C/qani Maxamed Bayow, Muqdisho/Somalia.
1 Jawaab " Iska horimaad ciidamo ka wada tirsan DKMG ah ku dhex maray Muqdisho iyo barakacayaal lagu furay rasaas "
Jigjiga Boy says:
Walee reer aan ogahay baan guurin! Hada walee reekan baan isku dhac iyo Isbaaro daynin! miyaysan khibrad ku filan ka qaadan 21 sano ee la soo dhaafay? wali ma u ciil qabaan wax la boobo iyo isku dhac?